Himalaya Dainik » पल र मलिकाको ‘टाढा भएपनि’ले राख्यो नयाँ रेकर्ड !
पल र मलिकाको ‘टाढा भएपनि’ले राख्यो नयाँ रेकर्ड !
दर्शक तथा श्रोताको अत्याधिक माया पाएका कारण ‘फुलबुट्टे सारी’ बोलको गीतले युटुबमा छोटो समयमा नै लोकप्रियता हासिल गरेको थियो । यो गीत सार्वजनिक भएको १८ दिनमा १ करोड भन्दा बढी दर्शकले हेरेपछि रेकर्ड राखेको थियो ।
अबभने उक्त रेकर्डलाई ‘टाढा भएपनि’ बोलको गीतले तोडेको छ । यो गीतलाई युटुबमा सार्वजनिक भएको १५ दिनमै १ करोड भ्यूज मिलेको छ । अस्मिता अधिकारीको स्वर, उर्गेन दोङको शब्द तथा संगीतमा तयार भएको यो गीतलाई युटुबमा १५ दिनमै १ करोड पटक हेरिएको हो ।
सवैभन्दा कम दिनमै १ करोड भ्यूज बटुल्ने गीतको रुपमा ‘टाढा भएपनि’ को भिडियोमा नायक पल शाह र नायिका मलिका महत्तले अभिनय गरेका छन् । यो जोडीलाई दर्शकले रुचाएका छन् ।
यो गीतले २४ घन्टामा ९ लाख ७२ हजार भ्यूज कमाउँदै एक दिनमा सबैभन्दा धेरै पटक हेरिएको गीतको रेकर्ड पनि राखेको थियो । नायक पल शाहले गीतले छोटो समयमा नै नयाँ रेकर्ड राखेको भन्दै समाजिक संजालमार्फत खुशी व्यक्त गरेका छन् ।